Imandarmedia.com.np: विदेश गएका श्रीमानका श्रीमती किन परपुरुषसंग अनैतिक सम्बन्ध राख्छन ?
Interesting, Interesting News » विदेश गएका श्रीमानका श्रीमती किन परपुरुषसंग अनैतिक सम्बन्ध राख्छन ?
विदेश गएका श्रीमानका श्रीमती किन परपुरुषसंग अनैतिक सम्बन्ध राख्छन ?
विवाह भनेको स्त्री पुरुषका लागि एक भावनात्मक तथा सामाजिक बन्धन पनि हो जो जिवन भर एक दोश्रोको बीचमा रहिरहन्छ । मनोविज्ञहरुका अनुसार यौनमा असन्तुष्टिले वैवाहिक जिवनलाई तोड्न ठूलो भूमिका खेल्छ । वास्तवमा महिला र पुरुष दुबैको हकमा यौनिक असन्तुष्टी दाम्पत्य जिवन टुंग्याउने मुख्य कारकको रुपमा रहेको मात्र छैन यो विभिन्न खाले अनैतिक तथा नाजायज सम्बन्ध र अपराधको कारक समेत बन्ने गर्छ ।
एक शोधका अनुसार विश्वका विकशित देशमा परपुरुषसँग नाजायज सम्बन्ध राख्ने महिलाहरु मध्ये ४१ प्रतिशतले यस्तो सम्बन्ध एउटा खुल्ला खेल बनिसकेको र त्यो सामान्य कुरा रहेको ठान्छन् । यस्तो धोखाधडीको मामिलामा पुरुषहरु पनि कम छैनन् ।
आफ्नो जिवनसंगिनीबाट यौन तथा भावनात्मक सन्तुष्टि प्राप्त गर्न नसकेर मात्र होइन नयाँ अनुभव बटुल्नका लागि वा कहिलेकाहीँ परिबन्दमा परेर समेत परस्त्रीगमन गर्ने पुरुषहरुको संख्या धेरै छ ।
शोधका अनुसार केही स्त्रीहरु यस्ता पनि हुन्छन् जो आफ्नो यौनको इच्छापूर्तिका लागि ऐश आराम तथा धन सम्पत्तिलाई लात मार्दै यस्ता युवकसँग लहसिन्छन् जसले उनको यौनको भोक शान्त पार्न सक्छ ।मनोविज्ञहरुका अनुसार आफ्नो श्रीमानबाट यौन सन्तुष्टि मिलेन भने महिलाहरु मानसिक रुपमा निकै प्रताडित बन्छन् जुन पीडामा मलहम लगाउन उनीहरुले परपुरुषसँग अनैतिक सम्बन्धको बाटो लिन्छन् ।
विवाहपछि सुरु हुने पारिवारिक जिवनमा विभिन्न खाले समस्याहरु पैदा हुनु सामान्य कुरा हो । हाम्रो संस्कारमा श्रीमान कामको शिलशिलामा बाहिर हुन्छन भने श्रीमती प्राय घरमै हुन्छन् ।
जसले गर्दा श्रीमान श्रीमतिको भेट हुनु पनि मुस्किल हुन्छ। भेट हुँदा पनि अफिसको टेन्सन सबै श्रीमतीमाथि थोपर्ने कारणले माया, प्रेमको भावना आउनुको सट्टा रिसाउने गर्दछन। फलस्वरुप त्यस्ता महिलाले अर्को पुरुषको खोजी गर्न थाल्छन् जसले प्रेम र सहानुभुति सँगै यौन सन्तुष्टि पनि प्रदान गर्न सकोस् ।
यसरी तनावमा हुँदा श्रीमतीसँग झगडा गर्न पनि पछि पर्दैन जसले महिलामा तनाव तथा नैराश्यता सिर्जना गर्छ । अन्ततः ती महिलामा आफ्नो श्रीमानसँग सेक्स गर्ने चाहना मर्दै जान्छ ।
Trending : Interesting, Interesting News